XOG CULUS: Xildhibaannada beelaha qaar oo la-kulankooda uu qaali noqday
Home » WARARKA MAANTA » XOG CULUS: Xildhibaannada beelaha qaar oo la-kulankooda uu qaali noqday	XOG CULUS: Xildhibaannada beelaha qaar oo la-kulankooda uu qaali noqday
20/03/2017	1,762 Views iyada oo dhawaan lagu wado in lagu dhawaaqo liiska golaha wasiirada Dowladda Fedaraalka Soomaaliya, ayaa waxaa la arkayaa ciriiri iyo mashquul ka jira qaar ka mid ah hotelada Muqdisho, halkas oo ay buux-dhaafiyeen dadka u xusul-duubaya qabashada xilalka xukuumadda.
Wararka xiisaha leh ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in hotellada ugu mashquulka iyo dadka badan ay noqdeen kuwa ay deggan yihiin, ama ay isugu yimaadaan xildhibaannada ka soo jeeda beesha Mareexaan oo uu madaxweynuhu ka dhashay.
Dadka ka ag dhaw goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo ee Muqdisho ayaa waxa ay ku warrramayaan in la-kulanka xildhibaannada Mareexaan ay noqotay arrin aad u adag, isla markaana la arkayo dad lacago badan ku bixinaya sidii ay ula kulmi lahaayeen xildhibaannadaas.
Sababta xildhibaannadan aragtidooda iyo la-kulankooda loo danaynayo ayaa waxaa lagu micneeyay in ay iyaga u sahlantahay tegitaanka xafiiska madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu uusan beryahan dadka oo dhan wada qaabilayn, mashquulka ka jira xafiiskiisa darteed.
Xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo xafiiska ra’isul-wasaaraha ayaa waxaa dhooban dad xil-doon ah, kuwaas -oo qaarkood- tegitaanka xafiisyadaas u soo maraya xildhibaannada ku beesha ah madaxada ama dad kale oo si uun ugu dhaw.
Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa waxa ay isbarbar-dhig ku sameeyeen hab-dhaqanka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo madaxweynayaashii labada ahaa ee isaga ka horreeyay, gaar ahaanna marka la eegayo xiriirka ay saddexdooduba la lahaayeen beelahooda. Waxaana soo baxday in Farmaajo uu labadii madaxweyne ee ka horreysay kaga duwan yahay u-dhawaashaha, iyo fursad-siinta gaarka ah ee xildhibaannada iyo dadka ka soo jeeda beeshiisa.
Tan iyo markii madaxweyne Farmaajo la doortay, waxaa magaalada Muqdisho ku soo qulqulayay dad u dhashay beesha Mareexaan, kuwaas oo marka aad la sheekaysato kuu sheegaya in ay xilal iyo fursado kale ka raadinayaan dowladda.
Abwaan Axmed Caalim oo si weyn loogu yaqaan gayiga Soomaaliya ayaa 1980 yiri:
Hintiflaha Waraabe hadow micida Hiigaayo
Libaaxina Hagoogtay ana hadalki waa Daayay
Si kastaba ha ahaatee, hadal-heynta ugu badan ee bulshada ayaa waxa ay ku saabsantahay sida ay xildhibaannada Mareexaan uga qiima badnaadeen kuwa beelaha kale, iyo fursadaha gaarka ah ee ay maanta ka helayaan madaxweynaha. Waxaana mid ka mida adeegsadayaasha baraha bulshada uu boggiisa ku soo qoray hadal sarbeeb ah, kaas oo la macne ah in beelaha Muqdisho dega ay maanta marti ka yihiin magaalada, oo ay been noqotay maah-maahdii dhahaysay “mukulaal minankeeda Joogta, miciyo libaax ayay leedahay!”
Previous: Xubin ka tirsanaa guddiga abaaraha Hirshabelle oo iscasilay (sababta ogow)
Next: Kusimaha madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay arrimo quseeya maamulkiisa (akhriso warbixin)